DEG DEG + XOG XASAASI: Dowlada Ingiriiska oo Somaliland ka diiday inay aqoonsato!, kuna qasabtay in Muuse Biixi la heshiiyo Farmaajo.! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG + XOG XASAASI: Dowlada Ingiriiska oo Somaliland ka diiday inay...
Hargeysa (Halqaran.com) – Dawladda Ingiriiska ayaa weli ku dhegan mawqifkeeda ah in dalalka gobalka ee Afrika ay horseed ka noqdaan aqoonsiga Somaliland iyo heshiis dhex mara Somaliland iyo Soomaaliya.
Wasiirka horumarinta deegaanka Marwo shukxi Xaaji Baandare oo Reuters ay la kulantay ayaa sheegtay in isbedelka cimilada laga dareemay Somaliland, waxase ay xustay in dadka reer Somaliland tashadeen.
“Waa ummad dhaqaaqday,”ayey tiri Wasiirka Deegaanka iyo Horumarinta reer Miyiga Marwo Shugri Xaaji Bandare oo xafiiskeeda ugu warrantay Thomson Reuters, waxaanay intaas ku dartay; “Isbeddelka cimiladu dhab ahaan waa laga dareemayaa Somaliland, waana arrin masiibo ah.”
“Ma lihin wabiyo iyo meelo kale oo biyaha aanu ku qabsanno, waxay nolashayadu ku tiirsan tahay gabi ahaanba roobka. Mana helo deyn aanu ka soo qaadanno dalalka caalamka,” ayuu yiri Faysal Cali Sheekh oo u Warramay Thomson Reuters.
Marwo Edna Aadan Ismaaciil oo ah haweenaydii u horreysay ee noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland ayaa sheegtay in nolol dhaqameedkii reer guuraagu ay baaba’day. Marwo Edna Aadan waxay ku dooday in halganka Somaliland ugu jirto aqoonsigu uu muhiim u yahay mustaqbalka dalka. “Marka lagu aqoonsan yahay, dadku way kuu imanayaan si ay kuu maalgashadaan,”ayey tiri Edna Aadan.
Wakiilka Somaliland ee Ingiriiska Ayaan Maxamuud, ayaa sheegtay in haddii la aqoonsado Somaliland iyo haddii kaleba ay shacabku samaynayaan horumar.
DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Deni oo si cajiib ah loogu soo dhaweyay Garacad
WAR DEG DEG: Qarax khasaare geystay oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
“Haddii nala aqoonsado iyo haddii kaleba waxaannu nahay dal doonaya inuu dadkiisu sameeyo horumar,”ayey tiri Ayaan Maxamuud oo tilmaantay inaanay cidina doonayn inay qaado talaabada koowaad.
Isku soo wada duub, Xafiiska arrimaha dibadda Ingiriiska, ayaa afhayeen u hadlay oo wakaaladan u waramay wuxuu sheegay in mawqifka Ingiriisku yahay inay Somaliland iyo Soomaaliya iyagu go’aan ka gaaraan sida uu noqonayo mustaqbalkoodu.
“Waxaanu si cad u aaminsanahay inay u taalo Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya inay go’aan ka gaaraan mustaqbalkooda”.
⇓ Sii Akhri Warar kale oo Xiiso Leh:
Dowladda Ingiriiska oo diiday inay aqoonsato Somaliland
kuna qasbay Hargeysa inay la heshiisyo Muqdisho